Ururka SOLJA Oo Ka hadlay Khilaafka Ka Taagan Shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Ururka SOLJA Oo Ka hadlay Khilaafka Ka Taagan Shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta
Published on February 28, 2018 by sdwo · No Comments
Hargaysa (SDWO): Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA, isagoo Ixtiraamaya shuruucda kala duwan ee Dalka ee ay ku aasaasan yihiin hay’addaha kala duwan ee Qaranku, waxa uu isagoo eegaya masuuliyadda ka saaran Difaaca iyo Horumarinta Saxaafadda ugu baaqayaa Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigalinta.
Inay dibu-eegis ku samayso go’aanka Shaqo ka joojinta iyo Anshax marinta ah ee ay ku riday 24-ka mid ah shaqaala weynaha kala duwan ee waaxyaha wasaaradda Warfaafinta.
Ururka SOLJA, waxa uu u arkaa khilaafyadda kala duwan ee ka taagan wasaaradda Warfaafinta iyo Shaqaalaha inay haboonayd siyaabo kale in lagu xaliyo, hase yeeshee go’aanka imika la qaaday ee ah Shaqo ka Joojin iyo Mushaharka oo laga jaro wuxuu culays ku yahay shaqaalaha iyo Qoysaskoodaba oo qaata Mushar aan ku filnayn.
Ururka SOLJA, waxa uu in badan Isha ku hayey khilaafyaddii kala duwanaa ee sidan oo kale u dhex maray masuuliyiintii kala danbeeyey ee wasaaradda soo maray iyo wariyayaasha ka hawlgala.
Waxaanay dhamaantood ahaayeen kuwo ka dhashay nidaamyaddii ay ku maamulayeen xukuumaddihii kala danbeeyey oo mar walba keenayey Muran.
Laga soo bilaabo Xukuumaddii UDUB ee Yagleeshay Telefishanka Qaranka Somaliland, waxa isa soo tarayey in kolba xukuumadda talada qabataa keenaysay Awaamiir ay nidaamka Maamul ee wasaaradda wax kaga bedelaysay.
Iyadoo Maamulka marna la hoos geynayey Madaxtooyadda, mar kale wasaaradda marar badana la Madax banaanaynayey, kuwaas oo khilaafka mar walba Horseedayey.
Cabashada Wariyayaasha iyo go’aanka ay wasaaradda Warfaafintu ka qaadatay waa kuwo aan horseedayn xal waara.
Sidaas daraadeed Ururka SOLJA, isagoo Ixtiraamaya karaamada Shaqada Qaranka in la ilaaliyo isla markaana la sugo xuquuqda Suxufiyiinta kala duwan ee u shaqeeya warbaahinta Dawladda iyo ta gaarka loo leeyahayba.
Waxa uu ku talinayaa inay Wasaaraddu dib u eegto go’aankeeda, oo ay u marto waddo kale oo xal u noqon kara khilaafka ka jira wasaaradda.